Gudigga doorashooyinka Puntland yo Midawga Yurub oo wada kulmay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Gudigga doorashooyinka Puntland yo Midawga Yurub oo wada kulmay.
Gudigga doorashooyinka Puntland yo Midawga Yurub oo wada kulmay.
September 16, 2019 - By: Mohamud Nadif
Gudigga ku meel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa Garoowe kula kulmay danjiraha midawga yurub u qaabilsan Soomaaliya, labada dhinac ayaa ka wada-hadlay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen sidii Puntland looga qaban lahaa doorashooyin hal qof iyo hal cod ah.
Guuleed Saalax gudoomiyaha gudigga ayaa Danjiraha la wadaagay qorshayaasha gudigga, wuxuu tilmaamey in hogaanka dawlada cusub ee Puntland ay ka goantahay sidii loo gaarsiin lahaa puntland doorasho hal-qof iyo hal-cod ah, taasna ay daliil u tahay sida ay waqtiga yar ugu soo magcaabeen gudigga doorashooyinka.
Nicolás Berlanga Martine ayaa dhankiisa sheegay in midawga yurub ay ka goantahay sidii loo caawin lahaa gudiggaan, wuxuu xusay in ay diyaar u yihiin in Puntland ay ka taageeraan qabsoomida doorasho hal-qof iyo hal-cod ah, hirgelinta barnaamijkaasna hogaanka Dawlada Puntland looga baahan yahay in ay ka dhabeeyaan.